How to setupasimple Git Repository Server? - Calm Hill
root@gitserver:~# adduser -m git root@gitserver:~# su git git@gitserver:~$ cd ~ git@gitserver:~$ mkdir .ssh
git@gitserver:~$ cd ~/.ssh git@gitserver:~$ cat mg_mg_id_rsa.pub >> authorized_keys git@gitserver:~$ cat ma_ma_id_rsa.pub >> authorized_keys
ဒါဆိုရင် mg_mg_id_rsa.pub နဲ့ ma_ma_id_rsa.pub နှစ်ယောက်ဟာ git ဆိုတဲ့ User Account ကိုသူတို့ရဲ့ Private Key တွေနဲ့ SSH ကို Access လုပ်လို့ရပါပြီ။ Server ဘက်မှာတော့ Repository ကို Initialize လုပ်ပေးဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ Command တွေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ Git Repository Initialize လုပ်တာက Server ဖြစ်တဲ့အတွက် Working Directory မလိုပဲလုပ်ရပါတယ် အဲဒီ့အတွက် —bare ဆိုတဲ့ Option တစ်ခုပါဖို့ သတိထားရပါတယ်။
git@gitserver:~$ cd ~ git@gitserver:~$ mkdir myproject.git git@gitserver:~$ cd myproject.git git@gitserver:~$ git —bare init
mgmg@computer:~$ cd ~ mgmg@computer:~$ git clone git@gitserver:myproject.git mgmg@computer:~$ cd myproject mgmg@computer:~$ touch README mgmg@computer:~$ git add . mgmg@computer:~$ git commit -am “Initial Commit” mgmg@computer:~$ git push origin master
root@gitserver:~# cp -R /usr/share/doc/git-your-version/contrib/git-shell-commands /home/git root@gitserver:~# chown -R git /home/git/git-shell-commands/ root@gitserver:~# chmod +x /home/git/git-shell-commands/help root@gitserver:~# chmod +x /home/git/git-shell-commands/list root@gitserver:~# chsh -s /usr/bin/git-shell git
အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Setup လုပ်မယ်ဆိုရင် Git Server တစ်ခုအလွယ်တကူ လုပ်လို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေတိုးလာရင် အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ အခုလုပ်ထားတာက User Account တစ်ခုကို လူအများမျှပြီးသုံးတဲ့နေရာမှာ Public Key တွေကို authorized_keys ထဲကိုရေးပေးရတဲ့အတွက် လူများလာတာနဲ့အမျှ ထိမ်းချုပ်ရခက်ပါတယ် လူတစ်ယောက်ကို ပြန်ဖျက်ဖို့အတွက် authorized_keys ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး တစ်ခုစီလိုက်ရှာရတာ အတော်ခက်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ချက်က လူတိုင်းမှာတူညီတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်နေပါတယ် သုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ ရှိသမျှ Repository တွေကို Access လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေ တိုးလာရင်တော့ အခြားသော Git Server Management Tools တွေသုံးရပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုမှပဲ Git Server Management Tools တွေအကြောင်းရေးပါဦးမယ်။